WikiLeaks Muvambi Julian Assange Akasungwa neBritish Mapurisa | Linux Addicts
WikiLeaks muvambi Julian Assange akasungwa nemapurisa eBritish
Julian Assange Makore makumi mana nemashanu, ndiani WikiLeaks muvambi, akasungwa kare nhasi (China, Kubvumbi 11), nevamiriri veMetropolitan Police Service (MPS) kuMumiriri weEcuadorian muLondon (paHans Crescent, SW1) kwaakange atizira. Pamutemo wakapihwa neWestminster Dare reRuwa muna Chikumi 29, 2012, wekutadza kuendesa kumatare.
Waive akavharirwa kukamba yemapurisa muLondon, kupi ichasara isati yatakurwa pamberi peDare reDunhu reWestminster nekukurumidza sezvazvinogona.
Chiziviso ichi chakaitwa munguva pfupi yapfuura kuburikidza neLondon Metropolitan Police webhusaiti.
London Metropolitan Police Service yaive nebasa rekuita iwo mvumo pachinzvimbo cheWestminster District Court uye mumiriri akamukoka kuti abve pamuzinda mushure mekunge hurumende yeEcuadorian yabvisa hupoteri.
Sajid Javid, Secretary of State akataura muma tweets:
“Anoda kusvika makore manomwe apinda mumuzinda weEcuadorian, ndinogona kusimbisa kuti Julian Assange ava muhusungwa uye anotarisana nematare kuUK. Ndinoda kutenda Ecuador nekubatana kwayo uye neMetropolitan Police Service nehunyanzvi hwayo.
Hapana ari pamusoro pemutemo. «
Julian Assange anga aramba kwemakore manomwe kusiya embassy, achiti kana akadaro, aizoendeswa kuUnited States kunobvunzwa nezve zviitiko zveWikileaks.
1 About Wikileaks
2 Ecuador inogona kumanikidzwa nezvematongerwo enyika here?
Tinofanira kurangarira izvozvo Wikileaks ipuratifomu iripo kubvira 2006 uye chikuva ichi chinozivikanwa zvakanyanya pasirese nezve chiitiko chayo kuburitswa kwemagwaro akavanzika, kuitira kuti zviwanikwe nevanhu vese.
Sangano inopa kugashira kudonhedza kunoratidzira hunhu kana hunhu maitiro ehurumende, ichinyanya kusimbisa nyika dzainofunga kuti dzine hutongi hwehudzvanyiriri, asiwo pazvinhu zvine chekuita nezvitendero nemakambani pasi rese.
Panguva ino, zviito zvakakurumbira zveWikiLeaks zvakanangana nebasa rekunze reUnited States, kunyanya zvine chekuita nehondo muIraq neAfghanistan.
Somuenzaniso, WikiLeaks inozivikanwa nekutsikisa zvinyorwa kubva kune inozivikanwa Vault 7 akateedzana. Pakati pa 2017 na 2018, nzvimbo dzayo dzepuratifomu dzakafumura mamwe maitiro ehusori hwemasangano ehurumende yeUS.
Uye zvakafanira kuyeuka kuti Wikileaks yakaburitsa akawanda emidziyo inoshandiswa neCIA, izvo zvatingataura nezvazvo Ghidra chishandiso chakaburitswa mavhiki mashoma apfuura.
Zvimwe zvakawanda zvinogona kutaurwa.
WikiLeaks - iyo CIA ingadai yakabira Samsung smart TVs? kuvashandura kuita zvishandiso zvekuteerera kuhurukuro dzepachivande (Vault 7)
Wikileaks, inopa chirongwa cheAngelfire, chinoshandiswa neCIA kukanganisa Windows XP uye 7 masisitimu nekutarisa iyo boot sector.
Ecuador inogona kumanikidzwa nezvematongerwo enyika here?
Washington Post Inosimbisa Kutya kweMuvambi weWikiLeaks. Sekureva kwebepanhau reUS, zviremera zveBritain zvakasunga muvambi weWikiLeaks mukupindura chikumbiro chekudzosera kubva kuUnited States mushure mekunge Ecuador yakanzura hupoteri hwake mumiriri wayo muLondon.
Paakaundi yake yeTwitter, JJennifer Robinson, gweta Julian Assange, anotsinhira:
"Assange akasungwa kwete chete nekutyora mitemo yekusunungurwa kwake nebherori, asiwo nechikumbiro chekudzosera kuUnited States. «
Maererano ne mutungamiri weEcuador, sarudzo yekusimudza hupoteri hwaAssange yakaitwa nehutongi hwakazara.
"Ecuador, nenzira yakasununguka, yakafunga kumisa hupoteri hwakapihwa Mr. Assange muna 2012.
Nzvimbo yaVaAssange yekupotera haichagadzirike uye haichashandi, "inoshuma iyo Washington Post of its About. Russia, kune chikamu chayo, yakamira ichidaidza chiitiko chevakuru veBritish "kudzvinyirirwa kwerusununguko. «
Mushure mekuonekwa kwake pamberi pedare reWestminster, Assange inofanira, mumutemo, kuitika muUnited States.
Ichapindura kune zvambotaurwa y kunyanya fungidziro yekubatana naChelsea Manning munhau yekutumira mauto vhidhiyo smear.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WikiLeaks muvambi Julian Assange akasungwa nemapurisa eBritish
USA yakamhan'ara mhosva dzakatungamira mukusungwa kwaJulian Assange